Ny tena fahamarinana momba ny fantsom-barotra | Martech Zone
Voalohany, tianay ireo mpanohana anay PaperShare, izay nampandeha ny herinay fitahirizam-boky miaraka amin'ireo whitepapers sy ebooks an'ny mpanohana anay. Izaho dia nanana fipoahana niasa tamin'ity infographic ity niaraka tamin'izy ireo.
Nandritra io fizotran-javatra io, nandinika ny antony tsy famarotana marketing intsony izahay; Izy io no fototra iorenan'ny ezaka marketing rehetra. Fa maninona ianao no mety manontany? Mety hahagaga anao angamba ity statistika ity. Araka ny Fanapahan-kevitra Sirius:
Ireo mpanjifa B2B dia mifandray amin'ny mpivarotra raha tsy aorian'ny 70% ny fanapaha-kevitra momba ny fividianana.
Andao hieritreritra izany mandritra ny iray minitra. Midika izany fa alohan'ny misy antenaina maniry hiresaka amin'ny ekipan'ny varotrao ianao dia mikaroka, misintona ary mifampiresaka amin'ny atiny amin'ny fomba sasany izy ireo hahafahana manapa-kevitra raha toa ianao ka kandida mety. Goavana izany!
Ny olana hafa dia, na dia miaraka amin'ireo rehetra ireo aza Analytics ary fitaovana misy ho antsika anio, dia mbola tsy mahazo fahitana feno amin'ny ezaka ataontsika isika satria matetika tsy mazava ny lalan'ny fiovam-po. Na dia nisy olona tonga aza naka ny whitepaper anao, ahoana no nahatongavany tany? Afaka nahita doka tamina tranokala hafa ry zareo, avy eo nanindry raha te-hiditra amin'ny tranokalanao, avy eo nidina. Roa herinandro taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hanaraka anao amin'ny fiaraha-monina izy ireo. Avy eo, iray volana taty aoriana, nanapa-kevitra ny hisintona ny iray amin'ireo whitepapers anao izy ireo amin'ny farany. Rehefa nieritreritra ianao fa ho tonga mivantana amin'ny tranokalanao izy ireo, raha ny marina dia nahita anao efa ho roa volana lasa izay tamin'ny doka iray. Tsy aleo ve ianao manana fahitana amin'ny làlana iray manontolo fa tsy rehefa nampidina ny whitepaper fotsiny izy ireo?
Mila izany fahitan'ny olona izay tonga amin'ireo pejy ireo izahay. Mila fahitana isika mba hahafahantsika mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa. Ary mila tantara momba ny fahatsinjovana isika mba hahafahantsika mampifanaraka ny atiny amin'izy ireo.
Zahao ity infographic mahatalanjona avy amin'ny PaperShare ity, ary alao antoka fa hijery azy ireo ianao raha mila filokana fizarana atiny!
Tags: tranomboky atinyContent Marketingebooksfitehirizam-bokyMarketing Infographicstaratasyfamelabelaranawhitepapers